သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၁၂-၅) ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၁၂-၅)
Author: lubo601 | 9:01 PM | No မှတ်ချက် |
နီပေါမှာ ပြင်းအားကြီးငလျင် ထပ်လှုပ်၊ ၂၉ ဦး သေဆုံး
ရိုဟင်ဂျာ စက်လှေ ပင်လယ်တွင်း ၃ ရက်ကြာ မျောနေ
ဖမ်းဆီးခံ ကျောင်းသားများနှင့် ၀န်းရံပြည်သူများကို ဗကသများ အဖွဲ့ချုပ် ခွပ်ဒေါင်းအလံများနှင့် ကြိုဆို (ရုပ်/သံ)
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတွင် အစိုးရတပ်က စစ်ရဟတ်ယာဉ်များဖြင့် တိုက်ခိုက်
မြ၀တီမြို့တွင် နေ့ခင်းကြောင်တောင် ၀င်ရောက်လုယက်သည့် သေနတ်ကိုင် ၂ဦး လွတ်မြောက်နေဆဲ
ခြံစည်းရိုးခတ်တာကို ကန့်ကွက်ခဲ့သူ ၅ ဦး ဖမ်းဆီးခံရ
အများကြီးသိမ်းပြီး နည်းနည်းပဲ ပြန်ပေးတာ မတရားပါ
သပိတ်မှောက်ကျောင်းသားများကို အများပြည်သူရှေ့မှောက် တရားစီရင်ခွင့်ပြု
မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းနေမှု ဗဟိုဘဏ် ထပ်မံသတိပေးထိန်းချုပ်
ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျ နိုင်ငံသားတွေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေကို အင်ဒိုနီးရှား လက်မခံ
နီပေါမှာ ငလျင် ထပ်မံလှုပ်ခတ်
ထပ်မံလှုပ်ခတ်သည့် နီပေါငလျင် လူ ၁၀ ဦးသေ အများအပြား ဒဏ်ရာရ
နီပေါမှာ ၇.၄ ပြင်းအားရှိ ငလျင် ထပ်မံလှုပ်ခတ်
နီပေါတွင် ၇ ဒသမ ၄ ပြင်းအားရှိ ငလျင် ထပ်မံလှုပ်ခတ်
ကောင်းမွန်သည့် အစိုးရ ရရှိရေး ကယားပြည်နယ် တိုင်းရင်းသား ပေါင်းစုံ ညီလာခံကျင်းပ
ယီမင်နိုင်ငံအတွင်းရှိ ဟူသီသူပုန်များက ဆော်ဒီ တိုက်လေယာဉ် တစ်စင်းကို ပစ်ချ
အမေရိကန်တွင် တိုက်ခတ်သည့် လေဆင်နှာမောင်းကြောင့် လူ ၂ ဦး သေ
လှေစီး ဒုက္ခသည် ပြဿနာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် တာဝန်လို့ မြန်မာပြော
သစ်မှောင်ခိုမှု KIA ပါသည့် သံသယကြောင့် စစ်တပ် ထိုးစစ်ဆင်ခြင်းဖြစ်နိုင်
တောင်ငူ၌ ငွေစက္ကူအတု ကျပ် ၇၆ သိန်းကျော် သိမ်းဆည်းရမိ
ရထားလမ်းကူး ခုံးကျော်တံတားပေါ်မှ အမျိုးသား တစ်ဦး ပြုတ်ကျသေဆုံး
နှစ်၂၀ရဲ့ပင်လယ်ရေက အရင်နှစ် ၁၀၀ ထက် ပိုမြင့်နေ
လိင်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ မင်းသမီး ၂၀၀ ကို အင်ဒို အရေးယူ
စပါးဝယ်လိုအားကြောင့် တင်း ၁ဝဝ လျှင် ငါးသိန်းဝန်းကျင်ထိ မြင့်တက်လာ
လွှတ်တော်များ ပြန်လည်စတင်၊ အခြေခံဥပဒေပြင်ရေး အဓိကဆွေးနွေးမည်
Posted: 12 May 2015 07:08 AM PDT
နီပေါ နိုင်ငံမှာ လူ ၈ ထောင်ကျော် သေဆုံး ခဲ့ရတဲ့ ငလျင်ကြီး လှုပ်ခဲ့အပြီး နှစ်ပတ် အကြာ ဒီကနေ့ အင်္ဂါနေ့မှာ ပြင်းအား ၇ ဒသမ ၃ ရှိတဲ့ ငလျင် တစ်ခု ဧဝရတ်တောင် အနီးမှာ ထပ်မံ လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဧဝရတ်တောင် အနီးက Namche Bazaar မြို့အနီးကို ဗဟိုပြု လှုပ်ခဲ့တဲ့ ဒီငလျင်ကြောင့် အခုချိန်အထိ အတည်ပြုနိုင်တဲ့ သေဆုံးသူ အနည်းဆုံး ၂၉ ဦး ရှိပြီး လူ တစ်ထောင်ကျော် ဒဏ်ရာ ရခဲ့တယ်လို့ နီပေါ အစိုးရက ပြောပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ငလျင်
Posted: 12 May 2015 07:07 AM PDT
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်က ကယ်ဆယ်ခံရတဲ့ ဒုက္ခသည် တစ်ထောင်လောက် အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံ၊ အာချေ ဒေသကို ရောက်ရှိခဲ့။ မြန်မာနိုင်ငံက ထွက်ခွာလာတဲ့ ရွှေ့ပြောင်း ဝင်ရောက်သူပေါင်း ၃၅၀ ပါ အဖွဲ့ တစ်အဖွဲ့ဟာ ပင်လယ်ပြင်ထဲက စက်လှေ တစ်စီးပေါ်မှာ စွန့်ပယ် ထားခဲ့ခြင်း ခံခဲ့ရတဲ့ အတွက် အကူအညီတွေ လိုအပ်နေတယ်လို့ အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူ တစ်ဦးကို တယ်လီဖုန်းက တစ်ဆင့် ဆက်သွယ် ပြောဆို ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ အဖွဲ့ထဲမှာ အမျိုးသမီး အယောက်
Posted: 12 May 2015 05:49 AM PDT
လက်ပံတန်းကျောင်းသားသပိတ်ကို အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲပြီး ဖမ်းဆီးထားတဲ့ ဒီမိုကရေစီပညာရေး ပင်မသပိတ်စစ်ကြောင်း ကျောင်းသားတွေနဲ့ ၀န်းရံပြည်သူ အယောက် ၇၀ ကို မေလ ၁၂ ရက်နေ့မှာ သာယာဝတီ တရားရုံးမှာ ရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကို ရုံးထုတ်စစ်ဆေးပြီး သာယာဝတီအကျဉ်းထောင်ဆီ ပြန်အပို့ လမ်းခုလတ်မှာ ဗကသများ အဖွဲ့ချုပ် ကျောင်းသားတွေနဲ့ ပြည်သူတွေက ခွပ်ဒေါင်းအလံတွေ၊ သပိတ်ဟစ်ကြွေးသံတွေနဲ့ စောင့်ကြို နှုတ်ဆက်
Posted: 12 May 2015 05:19 AM PDT
ဓာတ်ပုံ - Lung Jung ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း သိန္နီ၊ ကျောက်မဲနဲ့ အရှေ့မြောက်ပိုင်း လောက်ကိုင်၊ ကုန်းကြမ်းစတဲ့ ဒေသတွေမှာ အစိုးရတပ်နဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြား တိုက်ပွဲတွေ ပြင်းထန် ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ လောက်ကိုင်မြို့နယ် နန်ထိန်မိန်တောင်ကုန်းတလျှောက်မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းကစ တိုက်ပွဲ ဆက်တိုက် ဖြစ်ပွားရာမှာ ဒီကနေ့ မေလ ၁၂ ရက်နေ့မှာလည်း အစိုးရတပ်ဘက်က မိုးမလင်းခင်ကတည်းက လက်နက်ကြီး
Posted: 12 May 2015 05:17 AM PDT
မြ၀တီမြို့၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ ကြံခင်း ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းရှေ့ရှိ ငွေလဲဆိုင်တဆိုင်ကို နေ့ခင်းကြောင်တောင် ၀င်ရောက်လုယက်မှု ကျုးလွန်ခဲ့သည့် သေနတ်ကိုင် ၂ဦး လွတ်မြောက်နေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ မေလ ၆ ရက်နေ့ မွန်းလွဲပိုင်းက မမာဆိုသူ၏ ငွေလဲဆိုင်စားပွဲခုံပေါ်တွင်တင်ထားသော မြန်မာ ငွေကျပ် ၁၀ သိန်းကို အသက် ၁၉ နှစ် အရွယ်ခန့်ရှိ ခပ်ပိန်ပိန်လူငယ်နှစ်ဦးသည် ထိုင်းဘတ်ငွေနှင့် မြန်မာကျပ်ငွေလဲလှယ်ရန်ဟ
Posted: 12 May 2015 05:12 AM PDT
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အမရပူရမြို့ရှိ ရတနာပုံ တက္ကသိုလ်ရှေ့က ကွင်းအမှတ် ၅၉၁ ကို တက္ကသိုလ်ယာဉ်ရပ်နားစခန်း ပြုလုပ်ဖို့ စည်ပင်နဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ဒီနေ့မနက်မှာ ခြံစည်းရိုး ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘိုးဘွားပိုင်မြေတြွေ ဖစ်တယ်လို့ ပြောဆိုပြီး ခြံစည်းရိုးခတ်တာကို ကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့ ဒေသခံ ငါးဦးကိုလည်း ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ Photo: Nay Thwae/RFA RFA Burmese https://www.facebook.com/pages/RFA-Burmese
Posted: 12 May 2015 05:04 AM PDT
“လယ်သမားကြီး ဦးမောင်ငယ်ပိုင် ၉ ဒသမ ၁၆ ဧကရှိတဲ့ လယ်နှင့်ဥယျာဉ် ခြံမြေများကို ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ထိုစဉ်က တာဝန်ရှိသည့် အနောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူးဗိုလ်ချုပ်ဝင်းမြင့် လက်ထက်က သိမ်းဆည်းခဲ့ပါသည်။” ရခိုင်ပြည်နယ်၊ သံတွဲမြို့နယ်၊ ငပလီကမ်းခြေတလျှောက် တပ်က သိမ်းဆည်းထားသည့် လယ်မြေများ ပြန်လည်ရရှိရေးအတွက် တကိုယ် တော်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့သူ ဦးစိုးဝေကို သံတွဲမြို့နယ် တရားရုံးက မတ်လ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ထောင်ဒ
Posted: 12 May 2015 05:00 AM PDT
ဖမ်းဆီးခံ သပိတ်မှောက် ကျောင်းသားတွေနဲ့ ၀န်းရံပြည်သူတွေကို ဒီကနေ့ သာယာဝတီမြို့နယ် တရားရုံးမှာ ဒုတိယအကြိမ် ရုံးထုတ်စစ်ဆေးရာမှာ အများပြည်သူရှေ့တရားစီရင်ခွင့်ရရှိခဲ့ တယ်လို့ တရားလွှတ်တော်ချုပ်ရှေ့နေ ဦးသိန်းသန်းဦးက ပြောပါတယ်။ “ဆရာတို့က ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၁၉ (ခ)အရ အများပြည်သူရှေ့မှောက်မှာ တရားစီရင်ခွင့် ရဖို့ တောင်းဆိုတာ ရပါတယ်။ ခွင့်ပြုတယ်။ ဒါပေမယ့် ရုံးရဲ့နေရာအခက်အခဲအရ အကုန်လုံးတော့ ရုံး
Posted: 12 May 2015 04:53 AM PDT
မြန်မာကျပ်ငွေနဲ့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ လဲလှယ်နှုန်းဟာ အစိုးရ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဘောင်ထက် ကျော်လွန်နေတဲ့အတွက် သတ်မှတ်နှုန်းအတိုင်း ရောင်းချဖို့ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူတွေကို မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်က သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ ဗဟိုဘဏ်အနေနဲ့ မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုး ဆက်တိုက်ကျဆင်းနေတာကို အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ မေလ ၁၁ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မှာ ပုဂ္ဂလိက ဘဏ်တွေက တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ လိုင်စင်ရ နိုင်ငံခြားသုံးငွေ ရော
Posted: 12 May 2015 04:36 AM PDT
မြန်မာ နဲ့ ဘင်္ဂလာဒေ့ခ်ျ နိုင်ငံကလို့ ယူဆရတဲ့ ဒုက္ခသည် ရာပေါင်းများစွာကို တင်ဆောင်လာတဲ့ စက်လှေတစီးကို အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက လက်ခံဖို့ ငြင်းပယ်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီလှေကို သောက်ရေနဲ့ စားနပ်ရိက္ခာတွေ ပေးပြီး တနင်းလာနေ့က ပင်လယ်ပြင်ကို ပြန်ပို့လိုက်တယ်လို့ အင်ဒိုနီးရှား ရေတပ်က ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒုက္ခသည်တွေက မလေးရှားနိုင်ငံကို သွားချင်တဲ့အတွက် အခုလို လုပ်ဆောင်ရတာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်
Posted: 12 May 2015 04:35 AM PDT
နီပေါနိုင်ငံမြို့တော် ကတ္တမန္ဒူမှာ ယနေ့မနက်က ရစ်ခ်ျတာစကေး ၇ ဒဿမ ၄ ပြင်းအားရှိ မြေငလျင် လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ ငလျင်ဗဟိုချက်မှာ ဧ၀ရက်တောင်အနီး နမ်ချေဘာဆာမြို့နဲ့ ၆၈ ကီလိုမီတာအကွာလောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူပေါင်း ၈၀၀၀ ကျော်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ ပမာဏ ၇ ဒဿမ ၈ ပြင်းအားရှိ ငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီး သီတင်းပတ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ ယခုလို ငလျင်ထပ်မံလှုပ်ခတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး မျက်မြင်သက်သေများရဲ့ ပြောကြားချက်အရ နေအိမ်ပေါင်းများစွာ ပျက်
Posted: 12 May 2015 04:30 AM PDT
မေ ၁၂ ရက်က နီပေါမှာ ထပ်မံလှုတ်ခတ်ခဲ့တဲ့ နီပေါ ငလျင်ကြောင့် အနည်းဆုံး လူ ၁၀ ဦး သေဆုံးသွားပြီ ဖြစ်သလို လူအမြောက်အမြား ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြင်းအား ၇.၄ ရှိတဲ့ ငလျင်ကြောင့် အဆောက်အဦတွေ အမြောက်အမြား ပြိုကျခဲ့သလို အပျက်အစီး ကြားထဲမှာ လူတွေ ပိတ်မိနေတယ်လို့ နီပေါ ရေဒီယိုက ထုတ်လွင့်သွားပါတယ်။ ဒီအထဲက သေဆုံးသူ ၄ ဦးက ချောက်တရာက ဖြစ်တယ်လို့ နိုင်ငံတကာ ရွှေ့ပြောင်းနေ ထိုင်ခြင်း ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းကို
Posted: 12 May 2015 04:27 AM PDT
နီပေါနိုင်ငံ ဧ၀ရတ်တောင် အနီးက Namche Bazar မြို့နားမှာ အားပြင်းတဲ့ ငလျှင် လှုပ်ခတ်မှုတခု ဒီကနေ့ အင်္ဂါနေ့ မှာ ထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန် ဘူမိဗေဒ တိုင်းတာရေးဌာန အဆိုအရ ပြင်းအား ၇.၄ ရှိတဲ့ ငလျင်ဟာ ခတ္တမန္ဒူမြို့အရှေ့ဘက် ၅၂ မိုင်အကွာမှာ ဗဟိုပြုလှုပ်ခတ်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒေသစံတော်ချိန် နေ့လည် ၁၂နာရီ ၃၅ မိနစ်အချိန်မှာ ထပ်မံ လှုပ်ခတ်တဲ့ ဒီငလျင် တုန်လှုပ်မှုဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူးဒေလီမြို့နဲ့ ဘ
Posted: 12 May 2015 04:26 AM PDT
ဓာတ်ပုံ-အေအက်ဖ်ပီ နီပါမှာ အားပြင်းတဲ့ ငလျင် ဒီကနေ့ အင်္ဂါနေ့မှာ ထပ်လှုပ်ပြန်လို့ မြို့တော် ကက်သမန်ဒူမှာ လူတွေ လမ်းပေါ် အပြေးအလွှား ထွက်ကြရပြန်ပါတယ်။ အမေရိကန် ဘူမိဗေဒ တိုင်းတာရေးဌာနရဲ့ အဆိုအရ ဧ၀ရတ်တောင်ခြေအနီးက နမ် ချီ ဘာဇာမြို့ အနောက်ဘက် ၆၈ ကီလိုမီတာ အဝေးမှာ ပြင်းအား ၇ ဒသမ ၄ ရှိတဲ့ ငလျင် လှုပ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ငလျင် အရှိန်ကို အိန္ဒိယမြို့တော် နုယူးဒေလီအထိလည်း ခံစားရပြီး အဆောက်အဦတွေ တုန်ခါသွားတ
Posted: 11 May 2015 10:43 PM PDT
မေလ ၁၂ ရက် ၂၀၁၅ ကယားပြည်နယ်အတွင်း ရှိ နိုင်ငံရေး မဟာမိတ် သုံးခု စုပေါင်း ကမကထပြုမှုဖြင့် ဒေသခံ တိုင်းရင်း သားလူမျိုးများ နိုင်ငံရေး အသိနိုးကြားပြီး ကောင်းမွန်သည့် အစိုးရ ရရှိလာစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ညီလာခံတရပ်အား မြို့တော် လွိုင်ကော်၌ မေလ ၁၁ မှ ၁၃ ရက်ထိ ကျင်းပနေပါသည်။ ကယားပြည်နယ်ရှိ ကယားလူမျိုးစု ဒီမိုကရေစီပါတီ(Kayah Union Democratic Party ) ၊ ကယန်းအမျိုးသားပါတီ( Kayan National Party )
Posted: 11 May 2015 10:26 PM PDT
ဆာနား ၊ ၁၂-၅-၂၀၁၅ ယီမင်နိုင်ငံ အတွင်းရှိ ဟူသီသူပုန် များသည် မေ ၁၁ ရက်တွင် နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ဆာဒါးပြည်နယ် အတွင်းရှိ ဆော်ဒီ တိုက်လေယာဉ် တစ်စင်းကို ပစ်ချခဲ့ကြောင်း နိုင်ငံပိုင် ရုပ်သံ ဌာနတစ်ခုက ထုတ်ပြန် လိုက်သည်။ ယီမင်သူပုန် များသည် အဆိုပါ ဆော်ဒီ တိုက်လေယာဉ်ကို နိုရှုအာ တောင်ကြားတွင် ပစ်ချခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ယင်းသို့ ပစ်ခတ်ခံ ရချိန်တွင် ဆော်ဒီ တိုက်လေယာဉ်မှာ အနိမ့်မှ ပျံသန်းနေစဉ်တွင် ဖြစ်ပွား
Posted: 11 May 2015 09:01 PM PDT
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အာကင်ဆော ပြည်နယ်မှာ လေဆင်နှာမောင်း တိုက်ခတ်ပြီး လူ ၂ ဦး သေဆုံးသွားပါတယ်။ ဒီမတိုင်ခင်ကတည်းက မိုးလေ၀သဌာနက လေပြင်းနဲ့ ရေကြီးမှုတွေ ကြုံရနိုင်တာကို ကြိုတင်သတိပေးထားတယ်လို့ အန်ဘီစီ ရုပ်သံက မေ ၁၁ ရက်က ကြေညာပါတယ်။ မေ ၁၁ ရက် မနက်အစောပိုင်းမှာလည်း တက္ကဆက်ဘက်က ဗန်း ဆိုတဲ့ မြို့ငယ်လေးမှာလည်း မိုးကြိုးမုန်တိုင်းဘေးနဲ့ ကြုံနေရပါတယ်။ အန်ဘီစီ သတင်းအရ ဗန်းမြို့မှာ လူ ၂၆ ယောက် ဆေးရုံတင်
Posted: 11 May 2015 08:49 PM PDT
မွတ်စလင်ဒုက္ခသည်တွေကို တင်ဆောင်လာတဲ့ လှေတစ်စင်း ကို တွေ့ရစဉ် Photo: RFA ဒေသတွင်းမှာ လူတွေ အစုလိုက်အပြုံလိုက် နေ ရာပြောင်းရွှေ့နေကြတဲ့ပြဿနာရဲ့ မူရင်း ဇစ်မြစ်ဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့ မြန်မာအာဏာပိုင်တွေ က ပြောဆိုကြောင်း AFP သတင်းက ဖော်ပြပါတယ်။ အခုရက်ပိုင်းအတွင်း အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ မလေးရှား ကမ်း လွန်ရေပြင်မှာ သစ်သားလှေတွေနဲ့ မျောပါနေတဲ့ အမျိုး သမီးနဲ့ ကလေးငယ်တွေ အပါအ၀င် လူနှစ်ထောင်ကျော်ကို
Posted: 11 May 2015 07:41 PM PDT
မြန်မာနဲ့ နယ်ချင်းထိနေတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဟူဘီခရိုင်အလယ်ပိုင်း Baokang ဒေသက သစ်များ။ (မေ ၉၊ ၂၀၀၇) ကချင်ပြည်နယ်ကနေ တရုတ်နိုင်ငံဘက် ခိုးထုတ်တဲ့ သစ်မှောင်ခိုမှုတွေမှာ ဒေသခံ KIA တပ်တွေ ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့ မြန်မာအစိုးရဘက်က သံသယ၀င်နေတာကြောင့် KIA တပ်တွေကို အစိုးရတပ်တွေက လာရောက် တိုက်ခိုက်တဲ့ သဘောဖြစ်တယ်လို့ ယူဆကြောင်း ကချင် ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့က ပြောပါတယ်။ KIA တပ်bက်ကတော့ သစ်မှောင်ခိုမှု
Posted: 11 May 2015 07:35 PM PDT
တောင်ငူ၌ ငွေစက္ကူအတုများ သိမ်းဆည်းရမိ တောင်ငူ မေ ၁၁ တောင်ငူမြို့နယ် ကံရိုးကျေးရွာအုပ်စု ကံရိုးကျေးရွာ ရန်ကုန်-မန္တလေးကားလမ်းဘေးရှိ လျှံလျှံစားသောက်ဆိုင်တွင် ယနေ့မွန်းလွဲ ၂ နာရီခွဲက ငွေစက္ကူအတုများ လဲလှယ်မှုပြုလုပ်ရန် ရောက်ရှိနေကြောင်းသိရှိရ၍ တောင်ငူခရိုင် မှုခင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဒုရဲမှူး လှသိန်းစိုး၊ ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ ရဲအုပ်စိုင်းကျော်မျိုးထွန်း၊ ရဲအုပ်စိုးညွန့်နိုင်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် သက်သေ
ရန်ကုန် မေ ၁၁ မေ ၉ ရက် နံနက်ပိုင်းက သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ငမိုးရိပ် ဘူတာအနီး လေးထောင့်ကန်ရပ်ကွက်နှင့် ကြီးပွားရေး ရပ်ကွက်ကြားရှိ တည်ဆောက်ထားသော သံလမ်းကူး လူကူးခုံးကျော် တံတားပေါ်မှ ဖြတ်သန်းသွားလာသော အမျိုးသားတစ်ဦး တံတားပေါ်မှ အောက်သို့ပြုတ်ကျ သေဆုံးမှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ မေ ၉ ရက် နံနက် ၉ နာရီက ဦးအေးမြင့် (၇၄နှစ်) ကြီးပွားရေးရပ်ကွက် သံလမ်းအနီး နေထိုင်သော ကျန်းမာရေးမကောင်းသူသည် စံပြဈေးဘ
လွန်ခဲ့တဲ့ ​နှစ် ​၂၀ ​အတွင်း ​မြင့်တက်လာတဲ့ ​ပင်လယ်ရေ ​မျက်နှာပြင်ဟာ ​အရင် ​နှစ် ​၁၀၀ ​က ​မြင့်တက်တဲ့ ​ပယ်လယ် ​ရေမျက်နှာပြင်ထက် ​ပိုမြင့်နေတယ်လို့ ​သိပ္ပံ ​ပညာရှင်တွေက ​ပြောပါတယ်။ Nature ​Climate ​Change ​ဆိုတဲ့ ​သဘာဝ ​သိပ္ပံ ​ဂျာနယ်မှာ ​ဖော်ပြတဲ့ ​အစီရင်ခံစာ ​တစ်ခုက ​ဆက်တလိုက်ကနေ ​ရရှိတဲ့ ​အရင်က ​အချက်အလက်တွေနဲ့ ​အခုရှိနေတဲ့ ​အချက်အလက်တွေကို ​စုပေါင်း ​တိုက်ကြည့်ရာက ​ထွက်လာတဲ့ ​အဖြေကို ​ဖော်ြ
Posted: 11 May 2015 07:32 PM PDT
အင်ဒိုနီးရှား ​နိုင်ငံက ​မင်းသမီးနဲ့ ​မော်ဒယ်လ်တချို့ ​လိင်လုပ်ငန်း ​လုပ်ကိုင် နေကြတာကို ​အင်ဒိုနီးရှား ရဲတွေက ​အရေးယူ လိုက်ပါတယ်။ မင်းသမီးနဲ့ ​မော်ဒယ်လ် ​အယောက် ​၂၀၀ ​ရဲ့ ​နာမည်ကို ​အင်ဒိုနီးရှား ရဲတွေက ​ရရှိထားတာဖြစ်ပြီး ​အဲဒီ ​celebrity ​တွေဟာ ​သူတို့နဲ့ ​အတူတူ ​အိပ်လိုတဲ့ ​အမျိုးသားတွေကို ​ဒေါ်လာ ​ထောင်နဲ့ချီ ​တောင်းခံ ကြသူတွေ ​ဖြစ်တယ်လို့ ​သိရပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှား ​ရဲတွေရဲ့အဆိုအရ ​နာမ
Posted: 11 May 2015 07:29 PM PDT
ရေတာရှည် မေ ၁၁ တရုတ်ဈေးကွက်၏ ဝယ်လိုအားအပြင် ဒေါ်လာဈေး ဆက်လက်မြင့် တက်လျက်ရှိသဖြင့် စပါးဈေးမှာ ယခုနှစ် မေလအတွင်း တင်း ၁ဝဝ လျှင် ကျပ် ၄၇ဝဝဝဝ အထိ မြင့်တက်လာကြောင်း တောင်သူများက ပြောသည်။ ''ပျဉ်းမနားနဲ့ အေလာမြို့တွေဘက်က အဝယ်တွေ တအားဆင်းတယ်။ ဒီက ပွဲစားတွေထက် ဈေးလည်းပိုပေးတော့ တောင်သူတွေ အဆင်ပြေပါတယ်'' ဟု မှန်စီကျေးရွာနေ တောင်သူ ဦးတင်ဝင်းက ပြောသည်။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ရေတာရှည်မြို့နယ်အတွင်းရှိ
Posted: 11 May 2015 07:26 PM PDT
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် မေလ ၁၁ ရက်က ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် တက်ရောက်စဉ်။ Photo: NLD Chairperson ဒီကနေ့ နေပြည်တော်မှာ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်နဲ့ အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွေကို ပထမဆုံး နေ့အဖြစ် ပြန်လည် ကျင်းပနေပါတယ်။ ဒီတစ်ကြိမ် လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွေမှာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးနဲ့ ပြည်လုံးကျွတ် ဆန္ဒခံယူပွဲ ဥပဒေကြမ်းတွေကို အဓိကထားေ
စာမရေးဖြစ်တော့တာကြောင့် ကျနော်ကြိုက်ပြီး ဖတ်စေချင်တဲ့ စာလေးတွေကို တင်ထားပါတယ်ဗျာ
▼ 2015 (1680)
▼ May (208)
ဘုန်းကြီးကျောင်းသားဘ၀မှသည် ပါမောက္ခဘ၀ဆီသို့ (အပိုင်...
နည်း(၅) မိမိနှိုင်ယှဉ်မယ့်အရာတွေကို ဉာဏ်ရှိရှိ ရွေ...
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ၏ သမိုင်းဖြစ်ရပ်မှန်...
Government Unit (ရာထူးအခေါ်အဝေါ်များ)
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၃၁-၅)
ရေကူး ပြီးတော့ မြကျွန်းသာ၊ ဦးရဲထွဋ်ပဲရှင်းရတော့မယ်
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၃၀-၅)
သန်လေးကို ဟာသစုဗူး (၂၉-၅)
ဖတ်ရှု့ စုဆောင်းလိုသူများအတွက် သမိုင်းစာအုပ် (၄၈) အုပ်
7Day Hero - တစ်ကောင်တည်းပေမယ့် ခြင်္သေ့နှလုံးသားဖြင်...
ခေတ်သစ် ပေါ်ဦး လျှောက်ထုံး
၆၇ နှစ်အဘွားရဲ့ လေးစားစရာစိတ်ဓာတ်နဲ့ ယနေ့ခေတ် ကျနေ...
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၉-၅)
ခင်ဇော်ဦး ဟာသ ပေါင်းချုပ် ( ၂၈-၅ )
" လူတစ်ယောက်၏ တန်ဖိုး "
နှစ်ပေါင်း ၁၇ဝဝသက်တမ်းရှိသည်ဟုယူဆရသော ပျူကျောက်စာတ...
မြန်မာဘာသာဖြင့် ရေးသားပြုစုထားသော စာအုပ် ၁၈ အုပ် (...
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၈-၅)
သိထားသင့်တဲ့ နိုင်ငံတွေရဲ့ ဘားကုဒ်လေးတွေ
သမီးဖတ်ဖို့ ကျက်သရေ မနက်ခင်းကလေး - မောင်သာချို။
အဘယ့်ကြောင့် လူသေသောအခါ ဒီလိုလုပ်နေပါသလဲ ?
*** သံဓာတ်ချို့ တဲ့ခြင်းကိုဖော်ပြတဲ့ လက္ခဏာ (၉) ရပ်...
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၇-၅)
ဟာသ အသုတ်စုံ (၂၇-၅)
သီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ Dagon City project အပေါ်အြ...
ဖက်ဒရယ် ဥပဒေအကယ်ဒမီ အကြောင်း ဒီဗွီဘီ အင်တာဗျူးး
ကျောက်ခေတ်လူသားများနေထိုင်ခဲ့သည်ဟု ယူဆရသော ကျောက်ဂ...
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၆-၅)
ဟာသ စုစည်းမှု (၂၅-၅)
အလုပ်ခွင်မှာ စိတ်ဖိစီးမူ ခံစားရပါက
အ ရိ ပ် များ နှ င့်တွေ့ ဆုံ ခြ င်း
🍀 စိတ်ချင်းအဖေါ် 🍀
အမေရိကန်ရဲ အကြမ်းဖက်မှု ပြဿနာ
မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းပေါ်မှ ပျောက်လွယ်ခက် ထူးအိမ်သင် ၁၉၉၂
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၅-၅)
ဟာသ ပေါင်းချုပ် (၂၄-၅)
“ ရိုးသားခြင်းနဲ့ ချင်းတို့ပြည် . . . ”
မိဘများ၏ မှားယွင်းတတ်သော သင်ကြားမူများ
ဆရာဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ် . . .
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၄-၅)
အူမကြီးကင်ဆာ ဖြစ်မဖြစ် စောစောစီးစီး သိစေဖို့ရည်ရ...
ဒီမှာ လိုအပ်တဲ့ စာအုပ်ယူ
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၃-၅)
ဟာသ ပေါင်းချုပ် ( ၂၂-၅ )
ကိုယ်ဘဝ ကိုယ်ပျော်အောင် နေ
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပျော်စရာအကောင်းဆုံး အလုပ်လုပ်စရာ နေရာ F...
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၂-၅)
သန်လေးကို ဟာသအသုတ်စုံ (၂၁-၅)
“မရမက ခဏခဏ လာသာလာပါ ဆရာသမား”
Hair loss (2) ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း (၂)
ဆရာဦးတင်လင်း (ကျောင်းဆရာ RIT, Temasek Poly, Sing...
မွေးနေ့..မွေးရက်များနဲ့ သူရဲ့ ဂုဏ်သတ္တိများ.
သယံဇာတခွဲဝေရေး ညီမျှဖို့ စိန်ခေါ်ချက်က ဘာလဲ
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၁-၅)
ကျိုးကြေသွားသော အတ္တရဲ့ ခေါင်းလောင်းကွဲစ
ဟာသ စုစည်းမှု (၂၀-၅)
မည်သည် Android နဲ့မဆို Gmail account နဲ့ faceboo...
မရှိမဖြစ်သော အရည်အချင်း (၂) မျိုး
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၂၀-၅)
"ထိုင်းဘုရင်၏ သြဝါဒ အမှာစကား"
Hair Loss (1) ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း (၁)
သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၁၉-၅)
ဟာသပေါင်းချုပ် (၁၈-၅ )
ကင်ဆာ ပျောက်စေသော ကြက်ဥပြုပ်
► 2013 (4431)
► 2012 (6220)
► December (592)
► August (591)
► March (457)
► January (506)
► 2011 (3715)
► December (654)
လေ့လာစရာ Link များ
9 space study
Mutual Friend (ပြည်)
လူသားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်
အခြေခံ ဒီမိုကရေစီ သင်တန်း
ရောက်တတ်ရာရာ နိုင်ငံရေးနှင့် အတွေးအခေါ်
ကိုတိုက်မောင်း ကဗျာများ (6)
ကိုယ်တိုင်ရေး သီချင်းများ (1)
ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ (1053)
မှတ်စု အထွေထွေ (133)
လေ့လာရန် လမ်းညွန် (64)
Copyright © လူဗိုလ် ဟူသည် ... | Powered by Blogger
Blogger အလှဆင်ပေးသူ mgzinmyo(သုတစွယ်စုံ) | Blogger Theme ရှာပေးသူ Mg Zin Myo